Iska hor-imaad ka dhacay garoonka Kismaayo – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Iska hor-imaad ka dhacay garoonka Kismaayo
Iska hor-imaadka ayaa dhexmaray ciidamada amaanka Jubaland iyo ciidamo taabacsan Cabdinaasir Seeraar Maax Afhayeenkii hore ee Jubaland, haddana ka mid ah musharixiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Jubaland.
Ciidamo bastoolado ku hubaysnaa ayaa gudaha u galay garoonaka si ay u soo dhaweeyaan Cabdinaasir Seeraar oo ka yimid magaalada Muqdisho, iyadoo kadibna ciidamada ammaanka Garoonka oo doonayay inay baaraan boorsooyinka Cabdinaasir Seerar Maax ay iska caabin kala kulmeen Ciidamadiisa.
Afarta qof ee dhaawacmay ayaa lagu daweynayaa Isbitaalka magaalada Kismaayo, ma jirto wax dhimasho ah oo ka dhashay isku horimaadkaasi.
Isku horimaadkan ayaa imaanaya xili magaalada Kismaayo ay ka jirto xiisad ka dhalatay qaabka loo marayo soo xulista xildhibaanada cusub.
Previous articleJubaland oo sheegtay in 18 Shabaab lagu dilay duqeyn
Next articleEng. Yarisow oo sheegay Mataaneynta Muqdisho iyo caasimad kale
Xisbiga KULMIYE oo Baaq Degdega u diray Musharaxiintiisa